ChimeraOS: GNU / Linux Distro tsara ho an'ny lalao informatika misy Steam | Avy amin'ny Linux
Linux Post Install | 24/08/2021 06:00 | Fitsinjarana, About us
ny sasany Console sy solosaina gamers matetika izy ireo dia manonofy a sehatra natambatra izay mamela azy ireo hilalao ny lalao maoderina na Retro. Ary azo antoka fa tsy mora ny lalana tamin'izany. Steam miaraka aminy Rafitra miasa SteamOS izay mbola tsy nahavita ny fahatongavana sy ny fahombiazana, farafaharatsiny, nanondro lalana hahafahana milalao ny lalao vaovao sy taloha rehetra ity GNU / Linux. Na izany aza, anio isika dia hiresaka «ChimeraOS».
Ary maninona no ChimeraOS? Eny satria ity Distro GNU / Linux mifototra amin'ny Steam miaraka amin'ny Steam, manolotra a safidy mahaliana hotadiavin'ny Gamers maro hahita raha toa ka hitany fa tanteraka ny nofinofin'izy ireo.
Ary toy ny mahazatra, alohan'ny hidiranao ao amin'ny GNU / Linux Distro «ChimeraOS», hiverina eo an-tanana isika, ny sarobidy Lisitry ny GNU / Linux Distros mety hilalao, izay navoakanay indray mandeha tamin'ny lahatsoratray teo aloha izay nantsoina hoe: «Avadiho ho lasa Distro Gamer kalitao ny GNU / Linux anao«. Ireo Distributions ireo dia noforonina mba hanomezana traikefa lalao kalitao tsara kokoa. Ary anisan'ireto ireto manaraka ireto:
Fanamarihana: Samy manana ny tombony sy ny fahombiazany ny tsirairay avy, noho izany ny fanolorana ny iray dia miankina betsaka amin'ny tsiro manokana an'ny tsirairay. Ny iray tena tsara efa najanona Milalaova Linux. Voalaza manokana fa Lakka satria Distro tena tsara ny mametraka amin'ny karazana mikrokomputer Raspberry PI, araka ny resahina ao amin'ny a lahatsoratra teo aloha tao amin'ny DesdeLinux.
1 ChimeraOS: Sary GNU / Linux + Steam Big
1.1 Inona ny ChimeraOS?
ChimeraOS: Sary GNU / Linux + Steam Big
Inona ny ChimeraOS?
Raha ny filazan'ny Developer ao aminy tranokala ofisialy, voalaza toy izao manaraka izao:
"Rafitra miasa ho an'ny lalao informatika mifototra amin'ny Steam Big Picture. Izany hoe, Operating System izay manome traikefa filalaovana solosaina ivelan'ny boaty. Hatramin'ny, aorian'ny fametrahana azy dia manomboka mivantana amin'ny Steam Big Picture izy, ka mamela ny olona rehetra hilalao ny lalao ankafiziny, maoderina na Retro, tohanan'i Steam."
Ho fanampin'izay, ampio ity manaraka ity:
"GamerOS dia manana fiasa izay mety tsy ho vitan'ny SteamOS na oviana na oviana, noho ny fetra izay tsy teknolojia, fa ara-politika. Ary mamela ny olona rehetra hankafy traikefa filalaovana console tsy misy fikolokoloana, ankoatry ny fanaingoana hafa mety anananao. GamerOS dia hanampy anao hankafizanao ny lalao ankafizinao amin'ny solosainao, toy ny efa nataony tamiko."
Anisany endri-javatra miavaka azontsika atao ny manonona ireto manaraka ireto:
Mora ampiasaina: Ahafahanao miditra anaty rafitra fiasa vaovao hilalao ao anatin'ny minitra vitsy
mifototra amin'ny rindranasa matanjaka izay mampiasa rindrambaiko mirindra mba hametrahana sy hitantanana ny lalao amin'ny fitaovana rehetra.
Ampidiro ny ambany farafaharatsiny: Manolotra izay ilaina hilalao fotsiny fa tsy zavatra hafa. Ary noho izany, vonona ny hampiasa izy ary afaka manomboka milalao eo noho eo tsy mila manamboatra lalao mifanentana.
Vaovao hatrany: Ahitana fanavaozana tsy tapaka miaraka amin'ireo mpamily farany sy rindrambaiko natsofoka. Ho fanampin'izany, ireo fanavaozana ireo dia tonga ho azy tanteraka, ary mihazakazaka any ambadika nefa tsy manelingelina ny lalao.
Fifanarahana tsara amin'ny mpanara-maso lalao: Misaotra ny interface misy azy izay mifanaraka tanteraka amin'ny fanaraha-maso, izay ahafahanao mampiasa fanaraha-maso. Ary manolotra mifanentana tsara amin'ireo mpanara-maso Xbox, PlayStation ary Steam, ankoatry ny hafa, mba hahafahana milalao lalao mora foana, na avy amin'ny Steam, Epic Games Store, GOG ary amina sehatra console maro hafa.
Para vaovao misimisy kokoa amin'ny «ChimeraOS» afaka mitsidika ny tranokala ofisialy ao amin'ny GitHub, indrindra ny azy Wiki / FAQ izay anazavany zavatra maro momba ny niandohany sy ny fiasan'izy ireo. Na izany aza, raha te-hahita mivantana izany ianao lalao dia voamarina mba lalaovina tsy misy olana ao, ity manaraka ity dia azo zahana mivantana rohy.
Raha tsorina «ChimeraOS» Io dia araka ny ahitanao azy voalohany, safidy tsara hafa Rafitra miasa Steam, antsoina hoe "SteamOS" izany dia mbola tsy mahatratra ny birao misy ny solosainantsika amin-kery. Ary avy eo, safidy mahaliana hafa GNU / Linux Distros mety ho an'ny Gamer avo lenta izay mitaky fametrahana, fanamafisana ary fanamafisana ny fampiharana etona afaka milalao ny lalao valahany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » ChimeraOS: GNU / Linux Distro tsara ho an'ny lalao solosaina misy Steam
Lahatsoratra tena tsara. Tsy maintsy hizaha toetra ity rafitra fiasa ity izahay…. Mpankafy Fedora aho matetika, fa ny safidy betsaka kokoa no tsara kokoa
Miarahaba anao, Paul. Misaotra ny hevitrao ary eny, ny tena tsara dia ny manandrana mijery ny fomba fiasany mivantana amin'ny solosaina.
AutoKey: fitaovana mandeha ho azy asa ilaina ho an'ny GNU / Linux
Horohoron-tany: Ahoana ny filalaovana FPS Quake1 amin'ny QuakeSpasm ao amin'ny GNU / Linux?